Madagasikara: Ireo Nofinofin’ny Hoavy Sy Ireo Hevitra Sasany Mikasika Ny Fanampiana Iraisampirenena Ho An’i Afrika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Aogositra 2018 1:59 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jona 2007)
Ny fanantenana – teraka tamin'ny fivoriana TED tao Arusha – hoe eo amin'ny fiakarana mideza i Afrika dia nanentana ny tontolombolongana malagasy. Milaza amintsika i Aiky fa ny senatera malagasy Razafimbahiny Christian dia nanoratra boky iray mikasika ny fahombiazana izay ao anatin'izany no naniriany ny tsy hameran'ny tanora malagasy ny nofinofiny. Mametraka fanontaniana eo amin'ny blaoginy i Aiky hoe:
Manana nofinofy ve ny tanora malagasy (7 ka hatramin'ny 77 taona)? mikolokolo ny faniriana miafina izay hahafahany manaisotra ny fandraràna rehetra manakana azy amin'izao fotoana izao ve izy ? Tsy maintsy manonofy ny tsirairay. Azo atao ny manonofy… amporisihina hanonofy satria raha tsy eo ny nofy tsy hanana vina”
Vitan'i Harinjaka ny namadika ny nofiny ho asa mba hanampiany ny tanindrazany tamin'ny alalan'ny fankanesany nanatrika kaonferansa TED: « Afrika ny toko manaraka”. Manazava izy fa nanokatra ny masony ny adihevitra tao Arusha. Mikasa ny handao an'i Frantsa izy ary hiverina an-tanindrazana mba handray anjara amin'ny fanarenana ny firenena.
“Rehefa nifanerasera tamin'ireo bandy ireo, nandritra ny fivahinianako tao Afrika, mahamaika ahy mihoatra noho ny hatramin'izay ny fiverenana an-tanindrazana. Iza no maha Afrika an'i Afrika raha tsy ireo zanany ireo? Iza no maha-firenena ny firenena iray raha tsy ireo vato nasondrotry ny tany ao aminy? Saingy nahoana ireo vato nasondrotry ny tany voalaza ireo no tsy mitodi-doha mody? Tsy maintsy resy lahatra ve fa tsy misy hoavy mamiratra ao amin'ny firenena?”
Tao amin'ny TED, nanatri-maso ny adihevitra mikasika ny fanatsaràna ny mampahomby ny fanampiana ho an'i Afrika i Harinjaka ary maniry izy mba ho maro ireo Afrikana miteny frantsay no ho ao. Notohizan'i Randiana ny resadresaka, izay manoratra fa:
“Ireo fanehoankevitra ireo dia ahitana taratra ny faharerahan'ireo Tandrefana mpandoa hetra ao anatin'ny fandraisan'izy ireo anjara amin'ny ara-bola ho an'ny fanampiana iraisam-pirenena, fanampiana iray izay tsy hitan'izy ireo akory ny farany, na ireo vokany azo tsapain-tanana. Ny fitarainana tena vao haingana napetraky ny ONG frantsay mikasika an'ireo filoha, Bongo ao Gabon ary Sassou N'Guesso ao Kongo, dia maneho an'io hatezerana io. Raha voamarina io fanatsiniana io, dia ny fanampiana iraisam-pirenena no handray anjara hamatsy vola amin'ny fahazoana an'ireo hotely manokana any amin'ireo faritra mihaja ao Parisy ho an'ny tombontsoa manokan'ireo filoha roa ireo . Indrisy tsy feno tanteraka ny lisitr'ireo asa ratsy ireo.”
Manazava i Shadow Gasy fa ny iray amin'ireo fepetra tsy azo ialàna mba ho betsaka kokoa ny fandraisana andraikitra manoloana ny fanampiana iraisam-pirenena dia ahitana fotokevitra telo mifampiankina: ny governemanta tomponandraikitra, ny famaritana ny “Tany Tandalàna” ary ny anjara birikin'ireo tsy teratany.
“Lohahevitra iray omen'ireo firenena maromaro mitambatra mamatsy vola (ohatra) sy mpifanaraka ara-toekarena (ohatra) lanja mavesatra ihany koany Tany Tan-dalàna.
Mety ahitàna dikany maromaro ny fotokevitry ny Tany Tan-dalàna. Na izany aza, na eo aza io hamaroan'ny dikany io, toa tsy mitovy amin'ireo mpitsara afrikana hafa sy ireo mpahay lalàna afrikanista, fa vitsy ireo Malagasy mpahay lalàna mamaritra ny atao hoe Fanjakana sy ny Zo / lalàna.
Ny hevitra voalohany diso izay aposakay dia ny mikasika ny fitenenana fa tsy afaka miditra an-tsehatra ao anatin'ireo olana mahakasika ireo raharaham-pirenen'izay firenena mandray azy ireo vahiny.”